Home Wararka Xildhibaanada Barlamanka 11aad. Fuli ballanta aad qaaday
Xildhibaanada Barlamanka 11aad. Fuli ballanta aad qaaday
Walaal Mudane Xildhibaan;
Qoraalkan waxaan ugu talagalay xildhibaanada cusub ee walaalahay ah oo aan ugu duceynayo inuu rabbi ku asturo xilka iyo masuuliyadda dusha ka fuushay April 2022.
Anigoo soo koobaya waxa aa aan is leeyahay walaal waa ku anfacayaa si aad go’ammo wanaagsan u qaadatid waxay ila noqotay:
Go’aamada wanaagsan waxaa qaabeeya ama macno weyn u yeela texgelinta aragtiyooyinka kala duwan.
Go’aamada wanaagsan waa kuwa ugu dhow uguna saxan ficilka ama waxa la rabo in la qabto, sida doorasho, ama dhismo Cisbitaal ama eryid ergay dalkaaga jooga.
Go’aamada wanaagsan waa kuwa waxa ka qabta waxa dhalay dhibaatada ee aan ku mashquulin dhibaatada oo kaliya si loo xididdo oo aysan mar kale u soo noqon.
Go’aamada wanaagsan waxaa gaara dad ama xildhibaan og in lala xisaabtamayo maanta ama qiyaamaha.
Go’aamada wanaagsan waa kuwa u texgeliya mushkiladda si guud ee laguma mashquulo faraca ama qeyb yar oo ka mid ah waxa go’aanka laga qaadnayo.
Go’aamada wanaagsan waa kuwa isu dheellitira qiimaha mudada dhow iyo mudada dheer.
Go’aamada wanaagsan waa kuwa si wanaagsan bushada loogu sharraxo oo ay kula fahamtaa si ay kuula qaadato.
Go’aamada wanaagsan waa kuwa dhaca waqtiga loo baahan yahay ee aan ka soo hormarin ama ka soo dib dhicin waqtigooda.
Ma Hogaamiye ayaad Dooran Misa Maareeye?
Hogaamiye iyo Maareeye waa la isku khaldaa ee yaan laguugu khaldin xildhibaanow. Hogaamiye waa ruux aragtiyooyin fog leh oo weliba cadcad oo ah halka uu rabo inuu dalkaan geeyo ama uu mustaqbalka noqdo, kana muuqdaan taawaduc ama u jilcanaan dadka uu hogaamiyo oo aan qab iyo isla weyni lahayn. Shaxdaan ka tusaale qaado marka aan dooraneysid hogaamiye oo ha dooran maareeye aan aqoon meel uu geediga u raro balsa yaqaanno oo kaliya raridda marka loo sheego halka loo guurayo.
Hogaamiye waa kan Maareeye waa kan
-Dejiya himilada iyo Goolka
-Ka fekera fikradaha dhaqangalka ah
-Dadka dhiirrigeliya oo tilmaama guusha
-Sii garta mustaqbalka
-Leh dhaqan lagu daydo
-U diirnaxa dadka Liita iyo kuwa gafa. -Raaca himilada iyo Goolka hogamiyaha
-Ka fakara fulinta Aragtidaas iyo fikraddaas
-Dadka guushaas ku haga
-Ku eg wakhtigan xaadirka ah
-Aqbala dhaqanka wanaagsan ee hogaanka
-Ku fuliya waxa u qoran oo kaliya.
Walaalkeyga xildhibaanka ahow waxaa ku dusha kaa fuushay mas’uuliyad oo uu rabbi kula soo doontay, xataa haddii aad adiga doonatay waa lagu siiyey oo rabbi ayaa ogolaaday inay xambaartid. Marka waxay kuu noqon kartaa mid khater kuu ah oo adduunkaaga iyo aakhiradaada kaa cunta.
Tusaale adigoo qaatay go’aanno aad ogtahay inaysan umadda dan ugu jirin laakiin aad adiga xoogaa ka heshay ayaa mawdku ku haleelay adigoo:
Dembiile aadane ah oo dadkii ku aaminay go’aan xun u qaatay oo ku soo wada habaarayaan.
Adigoon ka towbad keenin oo aadan fileyn in jidka laguu gali karo adigoo wixii aad khaladay sixin wixii aa xaddayna soo celin.
Adigoon cunid wixii aad soo qaadatay ee ama laaluush ahaa ama magac kale lahaa laakiin aad ogtahay inuu khalad kugu soo galay.
Marka walaalyaal wixii khalad kaa dhacay ama sida aad ku timid oo noqon karta laaluush iyo musuq maasuq ha ku darsanin dembi kale ee waxaad sameysaa wanaag, wixii kaa dhacayna ka towbad keen waayo qofka dantiisa kuu maalgeliyey qiyaamaha qabriga kula geli maayo oo ciqaabta waa kugu kaligaa.
Maanta waxaad tahay xor waxaana laga yaabaa in wax wanaagsan oo aad ummadda u sameysid uu rabbi kaaga cafiyo wixii horay kaaga soo dhacay ee khalad aad kas u gashay iyo mid ay dani ku gelisay ama lagu geliyey. Sidaas darted Codkaaga ku cibaadeyso oo samee wax ummadda u dan ah adigana taada taas ayey ku jirtaa si caruurtaada ay ugu noolaadaan nolol ka wanaagsan tii aad ku soo kortay ee cabsida dhan walba ah lahayd.Dooro Hogaamiye ee ha dooran Maareeye cabirkaas markaad qofka saartid waxa uu yahay waa kuu soo baxayaa adigoo dib u eegaya taariikhda laga soo gudbay oo macallin cad kuu ah.
Allow marqaati ka noqo in MOL ay xildhibaanda la wadaagtay aragtidaan suuban.Ha illoobay inaad dhaaratay oo aan Kutubka iyo Magaca Rabbi kugu aaminnay.
W/Q. Maxamed Cusmaan Yusuf (Dhagacadde).
Previous articleJadwalka Doorashada Guddoonka Baarlamaanka oo la diyaariyey iyo Xilliga la qabanayo
Next articleFahad & Farmaajo ma fashilin doonaan kulanka Baarlabaanka ee Maanta loo ballansan yahay?
(Dhageyso) Xalima Yarey “Ma xoolo doon baa mise xaq iyo xalaal...